Hanorina sy hanarina ary lalampanorenana vaovao - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Araka ny lalàm-panorenana dia hatao amin’ny faran'ny taona 2018 ny fifidianana Filohan'ny Repoblika Malagasy. Mijoro eto anoloanareo ny tenako mamaly ny fangatahanareo na lahy na vavy, na tanora na zokiolona na tantsaha na manampahaizana manerana ny Nosy, manambara ho ren-tany ho ren-danitra fa hirotsaka ho kandidà amin’ny fifidianana Filohan'ny Repoblika malagasy.”
“Tapakevitra hirotsaka ho kandidà ny tenako, hamelona indray ny fanantenana ao am-pon’ny mpiray tanin-drazana difotry ny hakiviana sy ny adim-piainana. Handrindra ny fihavanana eo amin’ny samy Malagasy. Hamongotra ny ratsy rehetra, ny kolikoly, ny lainga, ny fitapitaka, ny halatra, ny fanitsakitsahana ny lalàna, loharanon’ny fahantrana mihanaka manerana ny Nosy.”
Tsy nambarany mazava teto fa ny antoko politika RAM no nanendry azy ho kandidà.
“Voalohany, hanao fampihavanam-pirenena sy hanorina ny fototra hiorenan'ny Firenena sy ny fanjakàna repoblikana aloha isika. Io no laharam-pahamehana lehibe indrindra. Tsy ho lany andro hitsikera, hanakorontana sy hanenjika fa handamina.”
Halamina ny fanaovana politika mba ho fitaovana hampandroso an'i Madagasikara fa tsy hampizarazara na hitadiavan-tseza. Ho jerena manokana ireo izay niharan’ny fahavoazana na miaramila izy na sivily.
Fampihavanam-pirenena ? Efa nandaniana andro io teto ary efa misy rafitra najoro ark any Lalampanorenana. Handrodana ve izany?
“Raha lany Filoham-pirenena aho dia haka andraikitra hanangana rafi-panjakàna iray antsoina hoe "Conseil des Anciens Présidents".”
Iza no antsoina hoe Président ? Ny president par interim ve izy ? Ratsirahonana ve izy? Rajoelina Andry Nirina ve izy ?
“Tsy maintsy handrafitra lalampanorenana vaovao isika. Lalampanorenana tsy natao ho an'ny Filoha amperin’asa. Lalampanorenana tsy natao hanilihana ny mpanohitra. Lalampanorenana haorin'ny Malagasy tsy vaky volo hatrany ifotony. Lalampanorenana manome hasina ny olom-pirenena tompon'ny fahefana, mivondrona ao amin’ny Fokonolona. Manomboka eo i Madagasikara dia hanana Lalampanorenana tsotra, fohy, mazava, maharitra.”
Efa nanambara ny fananganana ilay Conseil des presidents izy vao milaza fa handrafitra Lalampanorenana vaovao. Tsy tokony hiandry ilay lalampanorenana vaovao ve ny fananganana io Conseil io raha izany ?
“Faharoa, hatao vy miaina hamelombelona ny rafi-panjakàna rehetra ao anatin'ny Repoblika ny fitsinjaram-pahefàna (décentralisation). Ny taona voalohany hitantanako ny Firenena dia ho tsinjaraiko any amin’ny Faritra tsirairay avy ny fahaiza-manao hampihodina ny raharaha sy ny vola hiasana (décentralisation des compétences et des ressources financières).”
Ary ny kaominina ve tsy mahazo ny anjarany ? Kanefa di any kaominina izao no efa tena mijoro ara-dalàna amin’ireo voalazan’ny Lalampanorenana ankehitriny.
“Hohatsaraina ny fahefan’ny olom-boafidy toy ny Ben’ny Tanàna (Maire) sy ny Filoham-pokontany”
Efa lasa aloha ny candida eto.Mbola tsy voafidy ny Filoham-pokontany maro fa tendrena.
“Fahatelo, hataontsika laharam-pahamehana ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka… Fitsaboana sy fampianarana azo antoka misokatra amin’ny Malagasy tsy ankanavaka no hataontsika ka hahazo ny anjara masoandrony na ireo manana na ireo faran'izay sahirana.”
Tsy nambara mazava hoe maimaim-poana ny fianarana sy fitsaboana… Tsy naka risque ny kandida eto
“Hametraka ny fanalalahana ny haino amanjery sy ny tontolon’ny serasera ny tenako ka tsy ho RNM sy TVM natokana ho an’ny antoko politika eo amin’ny fitondrana intsony ny radio sy televiziona Malagasy. Hanangana “Fahefana Avon’ny Serasera” isika. Fahefana sady mahaleotena no tsy miandany na amin’iza na amin’iza.”
Rafitra vaovao hafa koa ity fahefana avon’ny serasera ity zalahy.
“Fahaefatra, hataontsika vaindohan-draharaha ny famelomana ny lalana an-tanety na an-dranomasina na an'habakabaka. Aza adinoina fa Nosy midadasika ity Madagasikara ity. Ny làlana no hampifandray antsika. Ny làlana no hamoahana ny vokatra. Ny lalana no hifaneraserana sy hanamafy ny fihavanana.”
“Hanorina tanàna vaovao isika isaky ny Faritany mba tsy hahasempotra intsony ny tanan-dehibe efa misy. Tanàna vaovao hampiroborobo ny toe-karena sy ny tsenam-bokatra (ville commerciale et économique) no sady hiteraka asa ho an’ny tanora ihany koa. Manomboka izao dia ezahina ho tanan-dehibe manaraka fepetra, mendrika honenana ny tanan-dehibetsika fa tsy tanàna misavoritaka sy mikorontana intsony.”
Faritra sa faritany no tena hifantohan’ny asa ?
Manoloana ny olana sy ny korontana atrehin’ny Malagasy isam-paritra momba ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany dia ampiharina ny lalàna. Koa tsy misy fitrandrahana azo tanterahina raha tsy mahazo alalana avy amin’ny Komity fampandrosoana isam-paritra. Ny Malagasy aloha no mahazo tombontsoa voalohany amin’ny fitrandrahana ny harena ankibon'ny tany fa raha tsy izany dia mivadika ho fivarotan-tanindrazana.
Komity fampandrosoana isam-paritra CLD ankehitriny ve izany ? Sa rafitra vaovao hafa koa ?
“Hanangana tahirim-bola iombonana izay vatsiana avy amin’ny ampahan’ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany isika (Fonds Souverain de Solidarité Nationale).
Hamelon-tena ny Firenena… Soritana fa tsy nisy resaka ny fiaraha-miasa amin’ireo mpamatsy vola vahiny mahazatra (Banky iraisam-pirenena, Tahirim-bola iraisam-pirenena…°
“Fahadimy, ny fanjakana ho tantaniko dia fanjakana tsara tantana fa tsy fanjakana hanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena na ny tahirim-bolam-panjakàna.”
Mora tononina izany fa ny fanatanterahana sarotra…
Ampahany tokoa ireo ary ny kandida moa dia milaza fa mbola ho avy ny fotoana hamelabelarany an’ireo.
Tsy nambarany tao anaty kabariny mihitsy izay vondron’olona na antoko nanolotra azy sy manohana azy. Ny fahitana an’ireo nijoro teo akaikiny no mety hahatarafana an’izany. Ho hita miandalana eny ihany koa izany rehefa tsy niteny mazava izy.
Faritra Matsiatra Ambony : Aza avela ho tany lavitra andriana ny Kaominina Ambanivohitr’i Solila - il y a 21 heures
Finoana sy tantara : Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa - il y a 21 heures